Ndụ Blu 8 ekwentị | Site na Linux
Ndụ Blu 8 ekwentị
Ụlọ ọrụ ahụ ngwaahịa blu Ọ bụ a dịtụ ọhụrụ ụlọ ọrụ na mobile ngwaọrụ ahịa, a American ụlọ ọrụ a na-eto eto nnọọ ngwa ngwa n'ihi na ọ na-enye nnọọ ọnụ ala ekwe ntị na nke ezi mma n'ozuzu. Taa, m ga-ekwu maka ya blu ndu 8 ekwe nti nke bu ihe di n'etiti (nke ugbua) nke nwere 8 processor nke na aru oru ya na 1.7 GHz tinyere Mali mp450 quad core graphics processor na 1GB Ram na 8GB nke ime ime (6GB nke diri onye oru) Ke ofụri ofụri, ọ bụ ihe magburu onwe ekwentị na-atụle ya price nke 180 dollar ma ọ bụ 2800 pesos na Mexico.
Mgbe anyị nyochara ekwentị ahụ nke ọma, anyị hụrụ igwefoto megapixel asatọ nke na-ewe ezigbo onyonyo n'okpuru ọnọdụ ọkụ zuru oke, agbanyeghị obere ọkụ gbaa na-eme ka onyogho a dị ntakịrị "acha anụnụ anụnụ", ya bụ, agba ndị ahụ adịchaghị oke. Kacha ziri ezi mana nke a bụ ihe a ga-atụ anya ya ebe ọ bụ ekwentị anaghị akwụ ụgwọ. Igwefoto n'ihu bụ megapixels 8 ma were ezigbo selfies ma ọ bụrụ na ọkụ ahụ zuru oke. Ihe nkiri vidiyo ahụ jupụtara na 2p 1080p ọ bụ ezie na ọnụego ya abụghị kpọmkwem 30fps ka ọ na-ekwu na igbe ya. Nsogbu bụ na a chọrọ ọkụ dị mma maka igwefoto iji rụọ ọrụ dị ka ebum n'uche, ọ bụ ezie na n'ozuzu ya nwere igwefoto ka mma karịa moto g (ọgbọ mbụ). Ihe ekwesịrị ịkọwa bụ na ọkụ ọkụ nke igwefoto isi (8 Mp) nwere ezigbo ọkụ ma na-enyere aka nke ukwuu mgbe ị na-ese foto na vidiyo n'oge ọnọdụ abalị.
Sistemụ arụmọrụ ya Ndụ blu 8 es A gam akporo 4.2.2 jeliinke a bit ochie ma echegbula i nwere ike imelite enweghị nsogbu ọ bụla na A gam akporo 4.4.2 kitkat ma mmelite ahụ na-eme ka mmalite animation gbanwee na okwu ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ, n'oge a amaghị ama ma ekwentị a ga-enwe mmelite ọhụrụ. Android 5.0 lollipop.
Ihe mgbaàmà wifi nwere oke magburu onwe ya, ebe dị ihe dị ka ụkwụ 50, na mgbakwunye na mgbidi, arịa ụlọ na nnyonye ndị ọzọ ọ jisiri ike nweta akara ngosi dị mma (Ogwe 2 nke 4) maka anya ahụ. Ikekwe maka ụfọdụ, ọ dịghị mma ile anya na ndụ blu 8 nwere blu Bluetooth 3.0 ebe ọ bụ ụdị 4.0 dị ugbu a mana n'ozuzu m nwere ike ịgwa gị na ọ naghị emetụta n'ezie ebe ọ bụ na ngwaọrụ niile m jiri na Bluetooth jikọtara nke ọma na-enweghị nsogbu.
Blu Life 8 isi igwefoto
Ugbu a naanị ihe fọdụrụ iji kpuchie bụ etu o si dị mma maka egwuregwu vidio, ọ bụ eziokwu? M dị ka onye ọkpụkpọ ma ọ bụ dị ka onye na-egwu egwuregwu nwere ike ịgwa gị na nke a blu ndu 8 ekwe nti Na-agba ọsọ n'enweghị nsogbu ọ bụla dị ka n'ime ndị nwụrụ anwụ, osisi megide zombies 2, ọgụ nke 4 na 5, ihe nwụrụ anwụ 1 na 2, BB Racing, ọdụm na ndị emulators nke nes, super Nintendo, gameboy advance, Nintendo ds, n64, psx, mame, neo geo. Ndị a niile na-agba ọsọ nke ọma na blu ekwentị ahụ na-agba mbọ wee malite ikpo ọkụ, nke ọ bụrụ na ịchọrọ igwu ya na nhazi ya na ndị emulators nke psp, ps2, gamecube, ọ bụ ezie na ọ ga-eju gị anya na egwuregwu ụfọdụ na nyiwe ndị ahụ zuru oke Ọ bụ n'ihi 8 cores na Ndụ blu 8.
Ogo nke oku a di nma nke oma ma ekwe nti na akwado kwa uzo abuo, otu sim sim na ndi ozo microsim ma dikwa nfe idozi ha. Ọ na-enyekwa oghere mgbasa microsd ruo 64gb (na igbe ọ na-ekwu naanị 32gb max.) Mana n'eziokwu ikike ya kachasị elu bụ 64gb!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Ndụ Blu 8 ekwentị
N'ihi na batrị dị ike na ojiji mgbe ọ gụrụ iji kwụọ ụgwọ